Indawo yaseSki uLortsa Rokytnice nad Jizerou
IRokytnice nad Jizerou (Rochlitz an der Iser ngesiJalimane) iyidolobha nezindawo ezisezintabeni entshonalanga nezintaba zaseGiant. Itholakala esifundeni saseLeberec, esifundeni saseSemily, esigodini esiphakeme sesifufula saseHu betweensk between phakathi kweziningi zeStráž (782 m), Čertova hora (1022 m) neLysá hora (1344 m) kanye nasogwini olusempumalanga (olusempumalanga) loMfula iJizera. Kuhlala izakhamuzi ezingaba ngu-2 600. ILysahora (Kahleberg ngesiJalimane) iyindawo ephakeme etholakala eCzech Ridge, eziNtabeni zaseGiant. Ukuphakama kwentaba kungamamitha ayi-1344. Ukusuka eRokytnice nad Jizerou isichwensi siholela engqungqutheleni efinyelela ku-1310 m, lapho kukhona khona isiteshi sayo esiphezulu. Indlela yethebula ivulwa kuphela ebusika. Ngokubonakala okuhle kakhulu iLysá Hora kanye nogquma lwezintaba zeGiant kungabonakala kusuka ePrague kusuka ebangeni elingamakhilomitha angama-120.
U-Horní Domky Mountains Lysa hora ski resort Ukushushuluza Rokytnice ebusika
Amathegi: U-Horní Domky Mountains Lysa hora ski resort Ukushushuluza Rokytnice ebusika